काे हुन् कन्निका ? जसले पारस शाहकाे ‘एटीएम’ नै लगेर कराेडाैं लुटिन् – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २२, २०७८ समय: १०:२७:५३
भाद्र २२, २०७८ मंगलबार 176
किनकि पारसले अनौपचारिक रुपमा विभिन्न युवतीहरुसँग सम्बन्ध गाँसे। सन् २००८ मा पारस थाइल्याण्डमा थिए। उनी त्यहाँ कन्निका चाइसान नामकी एक थाइ युवतीसँग प्रेममा थिए। पारसले त्यस सम्बन्धलाई गु,’पचुप पार्न निकै प्रयास गरे। तर सकेनन् ।अन्ततः पारस र कन्निकाबीच सम्बन्ध नेपाली मिडियालाई पनि थाहा भयोकन्निकाले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने स्टा,’टसहरुबाट यो खबरले मुर्त रुप लियो। सन् २००९ मा कन्निकाले फेसबुकमार्फत आफ्नो पे,’टमा पारसको ब,’च्चा भएको स्टाटस लेखिन्। जसले केही महिना सामाजिक सञ्जाल नै ता,’त्यो ।वास्तवमा कन्निका एक थाइ मोडल हुन्।
उनले थप्दै लेखेकी थिइन्, ‘यी महिला को हुन् ? म चिन्दिनँ।’ पारसनिकट साथीहरुको अनुसार भने पारस थाइल्याण्डमा हुँदा उनै कन्निकासँग सँगै बसेका थिए। उनले यो कुरा नेपाली र आफ्नो परिवारलाई जानकारी दिन चाहन्नथे। तर कन्निकाले नै यस विषयलाई बाहिर ल्याकन्निकाले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने स्टा,’टसहरुबाट यो खबरले मुर्त रुप लियो। सन् २००९ मा कन्निकाले फेसबुकमार्फत आफ्नो पे,’टमा पारसको ब,’च्चा भएको स्टाटस लेखिन्। जसले केही महिना सामाजिक सञ्जाल नै ता,’त्यो ।वास्तवमा कन्निका एक थाइ मोडल हुन्।
उनले थप्दै लेखेकी थिइन्, ‘यी महिला को हुन् ? म चिन्दिनँ।’ पारसनिकट साथीहरुको अनुसार भने पारस थाइल्याण्डमा हुँदा उनै कन्निकासँग सँगै बसेका थिए। उनले यो कुरा नेपाली र आफ्नो परिवारलाई जानकारी दिन चाहन्नथे। तर कन्निकाले नै यस विषयलाई बाहिर ल्याइन्।<strong>***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****</strong>
Last Updated on: September 7th, 2021 at 10:27 am